ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင်လကုန်၌ COVID-19 ကူးစက်ခံရမှုအသစ်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင် - Xinhua News Agency
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဘာလင်ရှိ ဓာတ်ရထားအနီးတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသော ခရီးသည်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘာလင်၊ ဇူလိုင် ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်သည် ဇူလိုင်လမကုန်မီတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးသည့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားဖြစ်လာကာ ကူးစက်မှုများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Jens Spahn က ဇူလိုင် ၁ ရက် ဖက်ဒရယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပိုမိုကူးစက်လွယ်သော Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် COVID-19 ထပ်မံကူးစက်မှုများသည် ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကတည်းက နှစ်ဆကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီနှင့် သုတေသနအင်စတီကျုဖြစ်သော Robert Koch Institute (RKI) က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျာမနီအစိုးရသည် နွေရာသီအကုန်တွင် အရွယ်ရောက်သူအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမည်ဟူသော ကတိအားတည်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု Spahn ကဆိုသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ပိုမိုများပြားလေ Delta ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အား ကာကွယ်နိုင်မည့် အဆင့်မြင့်မားလေ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ ဇွန် ၃၀ ရက်အထိ လူဦးရေ ၃၁ သန်းနီးပါးမှာ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝ ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုနှုန်းမှာ ၃၇.၃ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း RKI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးမထိုးသူများအား ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် Spahn က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ “ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ မတူတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးမှုများစွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်’’ ဟု၎င်းကဆိုသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ဇူလိုင် ၁ ရက်၌ ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၈၉၂ ဦးရှိပြီး နေ့စဉ်ကူးစက်မှု ဆက်လက်ကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်း နှင့် လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ်ကထက် ၁၁၆ ဦးလျော့နည်းခဲ့ကြောင်း RKI မှ သိရသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၌ ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်အထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၃.၇၃ သန်း နီးပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၉၀,၉၃၈ ဦး အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း RKI မှ သိရသည်။ (Xinhua)
BERLIN, July 1 (Xinhua) — The Delta variant is expected to become the dominant COVID-19 strain in Germany before the end of July with its share of positive cases approaching 80 percent, Health Minister Jens Spahn said atafederal press conference here on Thursday.
Almost 31 million people in Germany had already been fully vaccinated by Wednesday, bringing the country’s vaccination rate to 37.3 percent, according to the RKI.
Spahn urged his non-vaccinated compatriots to get tested regularly. “This is another important difference from last year, we have tests available onalarge scale,” he said.
To date, almost 3.73 million COVID-19 infections have been officially registered in Germany since the outbreak of the pandemic. The death toll climbed to 90,938 on Thursday, according to the RKI. Enditem